Nhau - nsw-api-600-gedhi-vharuvhu-kurongedza
Kuchengetedza uye kutsiva kweAPI 600 Gate Valve vharafu kurongedza
Kuchengetedza nzira yevhavha kurongedza:
Iwo mafiripi eprojekti aya anonyanya kuve nezvinhu zviviri zvinotevera: PTFE uye yakapfava graphite.
Kana yakachengetwa, yakasimbiswa muhomwe kana mubhokisi. Chengetedza zvakashongedzwa mudura rakaomeswa uye rine mweya, dzivisa mwenje wezuva. Teerera kufefetera panguva yekuchengetedza kwenguva refu, uye chengetedza tembiricha yenzvimbo yekuchengetera kuti isapfuure 50 ° C kudzivirira guruva rakawandisa. Kana guruva rakanamatira pamusoro peiyo filler rakabviswa uye roshandiswa, ripukute nejira rakachena.
Valve kurongedza yekutsiva nzira:
Zvisimbiso zvekutakura zvakanyorwa seinotevera: 1). Kurongedza compression nati, 2) Swing bhaudhi, 3) Yakagadziriswa pini, 4) Kurongedza, 5) Kurongedza ruoko, 6) Kurongedza kumanikidza ndiro (dzimwe nguva 5 ne6 zvikamu zvakakosha maererano neforoma uye Inotsanangurwa nemamiriro akasiyana ekushanda, iro basa rese yakafanana neiya yekuparadzanisa)
Iyo yekuisa chisimbiso yekutsiva matanho ndeaya anotevera:
1. Shandisa chipanera kubvisa 1) kurongedza compression nzungu uye kusimudza iyo 5) yekupakata yekudhinda ruoko uye 6) kurongedza yekudhindisa ndiro, ichisiya nzvimbo yekushanda kwekutsiva kurongedza.
2. Shandisa flat-blade screwdriver kana zvimwe zvidimbu zvesimbi kubvisa iyo yekutanga kurongedza woitsiva neimwe nyowani. Kana kurongedza kurongedza kuchishandiswa, kana uchiisa kurongedza kutsva, teerera kuti nhungamiro yekucheka kurongedza inofanira kudzadzarika ne 90 ~ 180 °, uye kona inosanganisirwa inofanirwa kudzokororwa vaviri vaviri. Usave nekupindana kwakawanda munzira imwechete sekuratidzwa mumufananidzo;
3. Mushure mekuisa yakaenzana chiyero chekurongedza, dzorera 5) kurongedza gland uye 6) kurongedza kumanikidza ndiro yekuisa. Paunenge uchiisa, teerera kune chinzvimbo chechisimbiso chekurongedza uye 6 ~ 10mm yakadzika mukati mevhavha yevhavha (kana 1.5 ~ 2 zvakapetwa pakukora kwekuputira) seinongedzo yekumira (Sezvinoratidzwa pazasi).
4. Dzosera 1). Kurongedza compression nati, 2) Sungisa iyo yekumisikidza chinzvimbo chejoinhi bhaudhi kusvika yasvika 20% yekupakira compression.
5. Mushure mekupedza nhanho dziri pamusoro, ita ongororo dzakakosha pavhavha iyo yakatsiva kurongedza mukushandisa kunotevera kuti uone kana zvichidikanwa kuwedzera preload yekupakira.
Hurukuro: Mirayiridzo yekusimbisa-kusimbisa uye kutsiva kurongedza pasi pekumanikidzwa.
Aya anotevera mashandiro ane njodzi mabasa. Ndokumbirawo usazviedze zvishoma kana zvisina basa. Ndokumbirawo uteedzere gwaro rinotungamira panguva yekuita nhanho.
1. Anoshanda anofanira kunge aine imwe nzwisiso yemachine nemavharuvhu. Kuwedzera kune anodiwa emuchina maturusi, anoshanda anofanira kupfeka kupisa-kudzivirirwa magurovhosi, kumeso nhoo, uye ngowani.
2. Ivhavha yacho yakavhurwa zvizere kusvikira chisimbiso chepamusoro chevhavha yacho chanyatso shanda. Hutongi hwaro ndewekuti vharuvhu inoshanda mashini haigone kusimudza iyo vharuvhu, uye hapana ruzha rwusinganzwisisike pademo revhavha.
3. Anoshanda anofanira kunge ari padivi pechisimbiso chekurongedza kana zvimwe zvinzvimbo zvisingakwanisike kuratidzwa. Izvo zvakanyatsorambidzwa kutarisana nekutakura chinzvimbo. Kana kurongedza kuchida kusimbiswa, shandisa chipanera kusimbisa 1) Kurongedza compression nati, 2 ~ 4 mazino, mativi ese epakuteedzera compression nati Inoda kuurayiwa, kwete chete divi rimwe.
4. Kana kurongedza kuchida kutsiviwa, shandisa chipanera kusunungura 1) Kurongedza compression nzungu, 2 ~ 4 mazino, kurongedza compression nzungu kumativi ese maviri inoda kuurayiwa neimwe nzira. Munguva ino, kana paine mhinduro isina kujairika kubva pavhavha yevhavha, pakarepo mira uye gadzirisazve nati, ramba Uchishanda iyo vharuvhu yekushandisa mashandiro zvinoenderana nemaitiro ari padanho rechipiri, zadzisa chisimbiso pane iyo vharuvhu kusvikira yanyatso shanda, uye ramba uchitsiva kurongedza. Iko kurongedza kurongedza pasi pekumanikidzwa hakubvumidzwe kuchinjwa zvachose kunze kwezviitiko zvakakosha. Iyo yekutsiva huwandu i1 / 3 yeiyo yakazara kurongedza. Kana zvisingaite kutonga, matatu epamusoro kurongedza anogona kutsiviwa. Mushure mekumisikidza kwapera, dzoreredza kuiswa kwe5 kurongedza ruoko rwekutsikirira ruoko uye 6 kurongedza pepanhau. Paunenge uchiisa, teerera kune chinzvimbo chechisimbiso chekurongedza uye 6 ~ 10mm yakadzika mukati mevhavhavhavhavhavha (kana 1.5 ~ 2 nguva pakukora kwekutakura) sechirevo chekumira. Dzosera 1). Kurongedza compression nati, 2) Simbisa iyo yekumisikidza chinzvimbo chejoinhi bhaudhi kusvika ku25% yekukwirisa kwakawanda kwekutakura. Kana pasina leakage muzasi vharuvhu hunde kurongedza, izvo zvakakwana. Kana paine kuvuza, tevera maitiro mune matanho 2 ne3 kusimbisa.
5. Matanho ese ekuvhiya ari pamusoro ndeekungosimudza mavharuvhu senge, kukwira kwevhavha yema stem, kukwira kwevha yemagetsi, nezvimwewo, hazvishande kumagetsi erima uye asingasimudzi mavharuvhu senge: rima regedhi revhavha, rima dzinde vhara vharafu, shavishavi vharuvhu, Ball mavharuvhu uye zvichingodaro.
Post nguva: Jun-30-2021